मंगल ग्रहको सतहमा चिनियाँ रोभर अवतरण- विज्ञान र प्रविधि - कान्तिपुर समाचार
मंगल ग्रहमा रोभर अवतरण गराउने अमेरिकापछि चीन दोस्रो मुलुक बनेको छ ।
काठमाडौँ — अमेरिकापछि मंगल ग्रहको सतहमा रोभर अवतरण गराउने चीन दोस्रो मुलुक बनेको छ । चीनको चुरोङ रोभरले मंगल ग्रहमा अवतरण गरेको हो ।
तस्बिर : पिपल्स डेली चाइना
करिब सात महिनाको अन्तरिक्ष यात्रापछि उक्त रोभर मंगल ग्रह पुगेको थियो । मंगल ग्रहको कक्षमा तीन महिनासम्म परिक्रमा गरेर शुक्रबार चुरोङ रोभर मंगल ग्रहको सतहरमा सफलतापूर्वक अवतरण गरेर नयाँ इतिहास कायम राख्न सफल भएको हो । चिनियाँ भाषामा चुरोङको अर्थ पौराणिक अग्नि र युद्धको देवताको रुप हो ।
चीनले तियान्वेन मिसनबारे थोरै जानकारी मात्र सार्वजनिक गरेको छ । तर यो रोभरले ‌मंगल ग्रहको सतहको नक्सांकन र त्यहाँ जीवको अस्तित्वको खोज गर्नेछ । तियान्वेन-१ यानमा एउटा अर्बिटर,ल्यान्डर र रोभर छ ।
चीनको नेसनल स्पेस एड्मिनिस्ट्रेसले शुक्रबार एक विज्ञप्ति मार्फत तियान्वेन-१ले अवस्था सामान्य रुपमा रहेको र काम गरिरहेको जनाएको थियो । अघिल्लो वर्ष प्रक्षेपण भएपछि तियान्वेन-१ले धेरै मात्रामा वैज्ञानिक तथ्यांक संकलन गरिरहेको चीनले जनाएको छ ।
चीनको यो रोभर मंगल ग्रहको उत्तरी गोलार्धस्थि युटोपिया प्‍लेनेसिया भू-भागमा अवतरण गरेको हो । त्यहाँबाट पृथ्वीमा रेडियो सन्देश पुर्‍याउन करिब १८ मिनेट लाग्छ । पृथ्वी र मंगल ग्रहबीचको दूरी ३२ करोड किलोमिटर छ ।
नासाको साइन्स मिसन डाइरेक्टरेट थोमस जरबुचेनले चिनियाँ स्पेस एजेन्सीलाई रोभर ल्यान्ड भएको केही समयमा नै बधाई दिएका छन् । उनले विश्वका सबै वैज्ञानिक जगतले स‌ंयुक्त रुपमा काम गर्ने हो भने मंगल ग्रहमा अझ विस्तृत रुपमा बुझ्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन् ।
चिनियाँ मंगल मिसनलाई अन्तरिक्ष अन्वेषणको एक महत्वपूर्ण हिस्साको रुपमा लिइएको छ । सन् २०२०मा चिनियाँ यानले चन्द्रमामा अवतरण गरेर केही नमुना लिएर पृथ्वीमा फर्किएको थियो । उक्त मिसनपछि अमेरिका र सोभियत युनियनपछि चन्द्रमाबाट लुनर नमुना लिएर फर्कने तेस्रो मुलुक बनेको थियो ।
यो वर्षको अप्रिलको अन्त्यमा पनि चीनले आफ्नो छुट्टै अन्तरिक्ष केन्द्रका लागि पहिलो मोड्युल पृथ्वीको कक्षमा पठाएको थियो । उक्त प्रक्षेपणका क्रममा एउटा रकेट अनियन्त्रित भएर हिन्द महासगरमा खसेको थियो ।
चीनको चुरोङ रोभरका अलावम यो वर्ष मंगल ग्रहमा नासाको पर्सिभरेन्स रोभर पनि अवतरण गरेको थियो । गत फेब्रुअरी १८मा पर्सिभरेन्स रोभरले मंगल ग्रहको सतहलाई छोएको थियो । हाल उक्त रोभरले मंगल ग्रहमा खोज तथा अनुसन्धान गरिरहेको छ । पर्सिभरेन्स रोभरसँगै रहेको नासाको इन्जिन्युटी हेलिकप्‍टरको पनि सफल परीक्षण भएको छ । इन्जिन्युटी हेलिकप्टर पृथ्वी बाहिर अन्य कुनै ग्रहको सतहमा उड्ने संसारकै पहिलो यान बनेको छ ।
प्रकाशित : जेष्ठ १, २०७८ १०:१३
सिकिस्त भएपछि अस्पताल
'अस्पताल आउने शतप्रतिशत बिरामी जटिल खालका हुादा मृत्युदर बढ्दो’
जेष्ठ १, २०७८ अमृता अनमोल
बुटवल — कोरोना संक्रमणलाई मौसी रुघाखोकी लागेको र ज्वरो आएको ठान्दा मृत्यु हुनेको संख्या बढेको छ । कोरोनाका लक्षण देखिँदा पनि परीक्षण र उपचार नगराउँदा संक्रमण घरपरिवार र समुदायमा फैलिएको छ । बुटवल–११ का मोहन शाही त्यसैमध्येका एक हुन् । उपचारमा बेवास्ता गर्दा ३५ वर्षीयले उनले ज्यानै गुमाए । ‘मौसम फेरिने बेला छ । सामान्य होला भनेर घरमै राख्यौं,’ शाहीका आफन्त टेकबहादुरले भने, ‘गलेपछि अस्पताल लैजाँदा बचाउन सकिएन । उपचार नपाएरै ज्यान गुम्यो ।’
आफन्तहरूका अनुसार शाहीलाई एक सातादेखि ज्वरो आएको थियो । कटकटी शरीर दुख्यो भन्थे । सुक्खा खोकी पनि थियो । तैपनि, सामान्य भाइरल होला भन्दै सिटामोल खाएर घरमै बसे । सोमबार साँझ सास लिनै गाह्रो भएपछि परिवारले लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालमा लगे । अक्सिजन लेभल घटेर ६०/६५ थियो । फोक्सोमा ठूलै दाग देखियो । जसोतसो आकस्मिक कक्षको भुइँमा ठाउँ पाए । परिवारले हारगुहार गरेर अक्सिजनको जोहो गरे । अन्तिम अवस्थामा अस्पताल गएका शाहीलाई अक्सिजनले मात्रै धानेन । ‘डाक्टरले आईसीयू वा भेन्टिलेटर खोज्न भनेका थिए,’ टेकबहादुरले भने, ‘तर, कतै भेटिएन । मंगलबार साँझ आकस्मिक कक्षको भुइँमै प्राण गयो ।’
घर नजिकै अस्पताल थियो । चिनेका डाक्टर र नर्सहरू थिए । तर पनि बुटवल–४ का सत्य पौडेलले बिरामी पर्दा कसैसित सल्लाह लिएनन् । यही बेवास्ताले ४८ वर्षीय उनको मंगलबार राति मृत्यु भयो । ‘मिल्दोजुल्दो लक्षण भए पनि कोरोना होइन जस्तो लाग्यो । भइहाले पनि घरमै जितिन्छ भन्ने ठानियो,’ छोरी पूर्णिमाले भनिन्, ‘यही बेवास्ताले बुबालाई गुमाउनु परेको छ ।’ अहिले परिवारका सबै सदस्यलार्ई पोजिटिभ देखिएको उनले बताइन् ।
दोस्रो चरणको कोरोनाका लक्षण एकै खाले छैनन् । चिकित्सकहरूका अनुसार ज्वरो आउने, शरीर दुख्ने, पखाला लाग्ने, शरीर गल्ने, वान्ता हुने, आँखा पाक्ने, स्वाद हराउने, रिंगटा लाग्ने, सास लिन समस्या हुने थरीथरीका लक्षण छन् । केहीलाई संक्रमण हुँदाहुँदै गलाउँछ । केहीलाई बिस्तारै समस्या ल्याउँछ । यही कारण केही व्यक्ति लक्षण देखिए पनि परीक्षण र उपचारमा लाग्दैनन् ।
बरु निको भयो भनेर हिंड्ने गर्छन् । यसले घरमै बिरामी शिथिल हुने र जटिल समस्या निम्त्याउने गरेको छ । ढिलो गरी अस्पताल जाँदा मृत्युदर बढेको छ । सामान्य फ्लु हो भनेर बेवास्ता गर्ने र शिथिल बन्दासम्म घरमै बस्ने परिपाटीले यस्तो भएको लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालका कोरोना फोकल पर्सन डा. नन्दुप्रसाद पाठकले बताए ।
‘आकस्मिक कक्षमै मृत्यु हुने बिरामी बढेका छन् । धेरै बिरामीको अस्पताल ल्याउँदा ल्याउँदै र परीक्षण गर्दागर्दै मृत्यु हुन्छ,’ उनले भने । चिकित्सकहरूका अनुसार अहिले अस्पताल आउने शतप्रतिशत बिरामी नै सिकिस्त र जटिल खालका छन् । अक्सिजन लेभल ८० भन्दा तल झरेका छन् । निमोनिया देखिएका र फोक्सोमा समस्या भएका छन् । उनीहरूलाई अक्सिजनसहितको आईसीयूमा उपचार गर्नुपर्छ । केहीलाई भेन्टिलेटरमा राख्नुपर्ने देखिन्छ ।
तर, अस्पतालको सीमित स्रोत साधनले बिरामीको आवश्यकताअनुसार उपचार गर्न नसकिने भीम अस्पतालकी मेसु डा. शकुन्तला गुप्ताले बताइन् । ‘थेग्नै नसकिने बिरामी छन् । बरन्डा, भुइँ र सिँढीको कुनोसमेत बाँकी छैन,’ उनले भनिन्, ‘सिकिस्त बिरामी हो भन्ने जान्दा जान्दै पनि आईसीयू र एचडीयू बेड उपलब्ध गराउन सकिएको छैन ।’ सामान्य अवस्थामा बिरामीलाई परामर्शले पनि आत्मबल बढाउन सकिने चिकित्सकहरू बताउँछन् । खानपानबाट पनि रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउन सकिन्छ । जटिल अवस्थामा पुगेपछि यी सबै बेकामे हुने कोरोना फोकल पर्सन डा. पाठकले बताए । ‘संक्रमित जहाँ बसे पनि स्वास्थ्यकर्मीको निगरानी र परामर्शमा हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘यसले मात्रै समुदायमा संक्रमण फैलनबाट रोक्न र मृत्युदर घटाउन सकिन्छ ।’
प्रकाशित : जेष्ठ १, २०७८ ०९:४२